शब्दकोश: .... आँसुको गरिमा
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, February 15, 2009
दीपक जडित February 15, 2009
झ्याउरे भन्ने बित्तिकै त्याँहा महझैं गुलियो रस हुन्छ भन्ने सोच पनि सायद देवकोटाले नै मुना मदनको मह चटाईदिएर उमारे होलान् हाम्रो मनमा । तपाईंको भाकाले झ्याउरेको तिर्षना मेटाईदियो अलिकति तर ब्लगमा प्रयोग भएको अक्षरको आकार भने आँखामा बिझाउने भयो , सामान्यता जस्तो र जत्रो आकारमा अक्षरहरु पढिरहिएको छ त्यत्रै र त्यस्तै खोज्छ रहेछ आँखाले ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) February 16, 2009
आशुको गारिमा बहुत आनन्द को हुन्छ ......मान्छे लाइ शान्ति मिल्छ .
मनछुने रहेछ .
Basanta Gautam February 16, 2009
नयाँ साजसज्जा सहितको धाइबाजीको घर धाऊँदै, रचनाहरुको तर मार्दै गरेपनि प्रतिकृया लेख्ने मेसो मिलेको थिएन।
यो झ्याउरे खजाना पनि मिठो लाग्यो। हाम्रो जीनमै बसेको हुन्छ कि कुन्नि, झ्याउरे लय असाध्यै आफ्नै लाग्छ।
नयाँ साजसज्जा राम्रो देखिएको छ तर टाउको (header) बाहेक अन्तबाट भने 'फूलबुट्टा' हटाइदिने हो कि? अलि बढीनै देखिएको छ।
Jotare Dhaiba February 19, 2009
मेरो झ्याउरेको लागि मीठो टिप्पणीको लागि सबैमा आभारसहित अलिकति आफ्नो स्पष्टीकरण पनि राखिहालूँ ।
दीपकजी, अक्षरको आकार के भयो-भयो, सुरुमा त सदाझैँ टाँसो खन्याएर पब्लिस गरेथेँ, तर ब्लग हेर्दा मेरो मनिटरमा अक्षर नै नबुझ्ने गरी चाउरियो । त्यो पोष्ट मात्र होइन, सबै नै सानो पाएँ मैले । अनि फेरि सम्पादनक्रममा आकार एक तह बढाइदिएँ र त्यो हविगत भयो । खासमा मेरो मनिटरमा त्यो अपर्झट समस्या देखियो । अन्यत्र हेर्दा ठीकै रहेछ, फेरि तपाईँको झटारो खाएसँगै बनाएँ ।
वसन्तजी, टेम्प्लेट फेरेसँगै साथीहरूको घेराबन्दीमा पर्दैछु । तपाईँको मननीय सुझावको सम्मान गर्दागर्दै पनि साइडबारको फूलबुट्टा मिलकाउन मेरो बशको कुरो थिएन, टेम्प्लेटको बनोटै त्यस्तो थियो । मलाई पनि अलि नक्कले लागेको थियो । पछि विकल्प खोज्दा त्यही वर्गको टेमप्लेटको अर्को ढाँचा रोजेँ । अब अलि ठीक भएको छ । र पनि आलोचना पाइ नै रहूँ ।
मिलन February 20, 2009
सारै नै मिठो कबिता | भाकामा कबिता पढ्दा कक्षा ३ मा थापा सरले मुनामदनको केही हरफहरु सुनाएको याद आयो... धन्यबाद
Jotare Dhaiba February 20, 2009
धन्यवाद मिलनजी, आफ्नो भन्या आफ्नै हो भन्छन्, थय्सैले हामीलाई हरपल तरङ्गित बनाइरहेको हुन्छ, जहाँ पुगे पनि ।
Dilip Acharya February 25, 2009
तपाईको झ्याउरे र टेम्प्लेट दुबै राम्रो लाग्यो ।
टेम्प्लेटको माथि रहेको दोस्रो लाईनको ट्याबको व्याक ग्राउण्ड भने अली धमिलो भएको जस्तो लाग्यो त्यसलाई पहिलो लाईन जस्तै व्याक ग्राउण्ड राख्‍ने की?
Jotare Dhaiba February 25, 2009
धेरै धेरै आभार दिलीप दाइ । टेम्प्लेट बल्ल अब फिक्स भयो । मेसो नपाउँदा धेरै अलमल र ऋलमल हुँदोरहेछ। दोस्रो ट्याबको धमिलो पृष्ठभूमि सादा बनाउने तरीका पनि अहिलेलाई मेरो बशको कुरा छैन,अज्ञानतामा कोड खेलाउनु खतरनाक हुन्छ ।
बिस्तारै यही टेम्प्लेटभित्र रहेर सुधार गर्दै जानेछु ।
अनि Followers को कुरामा पनि म त टेम्प्लेट परिवर्तनले पो सङ्ख्यामा त्यस्तो न्यूनता देखियो भनेर दिक्किरहेको थिएँ । उता साथीहरूको ब्लग र आफ्नै शङ्कर ब्लग हेर्दा भने उस्तै हालत देखेर जिल्ल परेको थिएँ । तपाईँको यस सुल्झाइले राम्रै मलम-पट्टी गर्‍यो ।